नेपाल प्रहरी Archives - Welcome Satakshidham
Tag: नेपाल प्रहरी
बिर्तामोड : शिशुको शव भेटियो, ट्याक्टरले किचेर एकजनाको मृत्यु
झापा । झापामा मंगलबार बिहान सालनाल सहितको मृत शिशु फेला परेको छ । स्थानीयले बिर्तामोड ४ स्थित अदुवाखोलामा माछा मार्ने क्रममा पानीमा तैरिहरेको सालनाल सहितको मृत शिशु देखेपछी प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीका अनुसार…
फाकफोकथुममा खपांगी दम्पत्तिको हत्या
जीवन चौहान इलाम । इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिकामा एक दम्पत्तिको शव हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेका छ । फाकफोकथुम–५, लुम्देको कैंजले भन्ने स्थानका धनबहादुर खपांगी र उनकी श्रीमती रीता खपांगीको शव बुधबार दिउँसो घरको बलेंसीमा ‘रहस्यमय’…
स्थानः शिवसताक्षी नगपालिका–७, लालझोडा मितिः २०७५ मंसिर १० समयः करिब १० बजे । झिलझिलेबाट माहाभारा जोड्ने सडकको सय मिटर पश्चिम । काठको दुईतले कच्ची घर । राति एक्कासी आगलागी हुँदा दुई नाबालकसहित ४ जनाको सुतेकै…
मावाखोलामा पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ
वेलकम सताक्षीधाम दमक । प्रहरीले कटुवा पेस्तोलसहित एक जनालाई झापामा पक्राउ गरेको छ । दमक नगरपालिका–३, मावाखोलामा मिक्लाजुङ गाउँपालिका–९, मधुमल्लका ४४ वर्षीय मेघराज गौतम कटुवा पेस्तोलसहित पक्राउ परेका हुन् । विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी…
नेपाल प्रहरी संगठनको भित्री कुरा
यस अघिसम्म आइजीपी नियुक्तिमा बिरिएको बाटो यसपटक सच्चिएको छ । कुबेरसिंह राना टिमको अनुभवलाई नजिरका रुपमा लिने हो भने अहिलेको नेतृत्वले संगठन सञ्चालनमा असहयोग र बेमेलको तीतो अनुभव शायदै गर्नुपर्ला । प्रहरी संगठनले प्रहरी कार्य…
नेपाल प्रहरीका डीआईजी डा. सुब्बाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) डा. राजीव सुब्बाले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । सुब्बाको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छैन । सुब्बाले घरायसी कारणले राजीनामा…